Ny rojo bisikileta dia ny akora ampiasaina amin'ny 'Unchained' | Famoronana an-tserasera
Raha nanome rojo bisikileta be dia be izahay ary nilaza taminay fa tokony hamorona sary sokitra amin'izy ireo, azo antoka fa izany izahay dia hijery endrika adala amin'ilay manolotra izany hevitra izany, fa raha nandalo ny tanan'i Nirit Levav izy ireo, azo antoka fa afaka andro vitsivitsy dia ho gaga isika noho ny maha-izy azy sy ny fahaizany mamorona fantsika alika.
"Tsy misy sarina" dia a fanangonana sary vongana habe amin'ny fiainana alika namboarina tamin'ny ampahany namboarina tamin'ny bisikileta isan-karazany, fa ny rojo vy. Ny tena mahavariana amin'ity andiana sary sokitra ity dia ny fahitan'izy ireo ny fihetsem-pon'ny alika amin'ny karazany isan-karazany sy ny sary samihafa miaraka amina eschatolojika kely indraindray.
Mahavita misambotra ireo alika amin'ny fotoana fohy sy fomba fiteny i Levav izay mahatonga ny olona hino amin'ny voalohany fa vita amin'ny vy vita amin'ny vy izy ireo. Ny marina fa izy ireo tena manaitra tsirairay amin'ireo sary sokitra alika izay nataony tamin'ity tetikasa antsoina hoe «Unchained» ity.
Vitanovsky dia mpanakanto hafa izay nandeha namakivaky ireto andalana ireto ary naneho taminay ny kantony rehetra tamin'ny sary sokitra tamin'io bull bull, na Hun Lek sy ny fitiavany ny Hulk ary izay sary sokitra goavambe izay manana an'ity fitaovana namboarina ity ny fototra hitondrana antsika ny andalana an'io toetra io avy amin'ny tantara an-tsary.
Nirit Levav dia mpamorona sy mpanakanto maro karazana izay nifandray akaiky tamin'ny zavakanto sy ny fanodinana. Nandritra ireo taona niasa nahomby dia nanangana ny tenany ho mpamorona lamaody izy izay manohy mamantatra sy manandrana fitaovana samihafa, ary manohy mampihatra ny fahaizany mamorona firavaka, miasa amin'ny vy na koa seramika.
Tao anatin'ireo taona lasa izay dia i Levav no miasa indrindra amin'ny fitaovana fanodinana toy ny rojo bisikileta, piston vita amin'ny moto, fanalahidy na famantaranandro. Ianao dia manana ny tranokalanao avy amin'ity rohy ity mba hanaraka ny asany tena tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Unchained', fitambarana sary sokitra alika mitovy habe amin'ny fiainana noforonina tamin'ny vy metaly